YINTONI UKUSETYENZISWA KAMATYALA ALETYALA NGEENJONGO zeRubber?
ngu admin nge-20-07-17
Abantu abaninzi banomona wokubona abanye abaqhubi abadala beqhuba ngobuchule endleleni. Ngapha koko, bonke baphuma kwinqanaba le-novice ngenyathelo. Baqokelele amava amaninzi ngaphambi kokuba baqhube kakuhle. Luhlobo luni lwabaqhubi oluthandwayo kakhulu ngumqhubi weloli. Ubungakanani belori i ...
Olo lukhetho lweClothi yeFlat
Kubomi bethu, inqwelo isetyenziswa ngokubanzi. Ihlala isetyenziswa kwiihotele, kwiivenkile ezinkulu, iofisi, izinto, mihla le, Ivenkile enkulu, indawo yomzi mveliso nakwezinye iindawo ezininzi. Inokusombulula iingxaki ezininzi zokuhamba kwaye izise ulwazelelo olukhulu ebantwini. Nangona kunjalo, ukuba uthenga inqwelo eglanti engalunganga kakhulu, ...
Ulwazi loHlelo loCingo lweWire Mesh
Ukuhlelwa ngoku kweshedyuli yokuhombisa yensimbi kubandakanya i-mesh yokuhombisa yentsimbi kunye ne-aluminium yearhente, ikhethini yokujikeleza ngocingo, itafile yentsimbi ye-aluminium iplagi yokuhlobisa i-mesh, i-iron bead ikhethini, umnatha wokuhombisa ngentambo, njn njl njl. ..